"Andriamanitra dia fitiavana. 1 Jaona 4:8 Fony mbola fahavalo ... isika no nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny nahafatesan’ny Zanany." Romana 5:10
Nitranga ny loza. Nohenoin’i Adama sy Eva ny laingan’i Satana, izay nametraka ahiahy momba ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra. Tsy nankatoavin’izy ireo Andriamanitra. Izao izy ireo dia matahotra ka miery. Nefa mitady azy kosa Andriamanitra. Nanontaniany i Adama momba izay zavatra nitranga. Miteny ho azy ny navaliny: “Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho” (Genesisy 3:12). Izany hoe natsipin’i Adama tamin’Andriamanitra aloha ny fahadisoana, avy eo tamin’ny vadiny.
Tsy toy izany koa ve, ankehitriny, ny fihetsiky ny olona amin’Andriamanitra? Ny fijaliana dia vokatra mivantana avy amin’ny otan’ny olona. Nefa ny ataontsika voalohany dia ny miampanga an’Andriamanitra. Ireo ady mandravarava izao tontolo izao dia manaporofo mazava fa nanalavitra Ilay Andriamanitra fitiavana ny olona. Izy ve no tokony homena tsiny, raha misy firenena mifamono, sy ankizy mijaly? Ny sasany matin’ny hanoanana, ny hafa kosa mandanilany foana. Ireny faharatsiana rehetra ireny dia vokatry ny fikomiana tamin’Andriamanitra daholo. Ary koa, Andriamanitra ve no tokony holazaina fa tompon’andraikitra, nefa isika no ratsy fitantana ny harena eto amin’ity planeta ity?
Ary rehefa miteny amin’ny zanak’olombelona Andriamanitra, amin’ny alalan’ny loza ara-boajanahary, tsy ny mba hiantsoana azy ireo hiverina aminy ve no anton’izany? Nefa mbola tsy nisy ohatra izany, fa vao mainka aza ny olona miampanga Ilay Mpahary azy. Efa adala mihitsy ny olona, ka sahy manadina an’Andriamanitra amin’izay ataony!
Na izany aza Andriamanitra dia tia ny voariny izay mikomy aminy. Mba hanafahany azy amin’ny vokatry ny ota, dia ny Zanany mihitsy no natolony ho sorona. Nofaiziny teo amin’ny hazofijaliana Jesosy, nisolo antsika, mba hahazoany mamela heloka antsika. Aleo isika tsy manipy ny fahadisoana any amin’Andriamanitra, fa miaiky aminy kosa ny fahotantsika sy mandray ny famotsoran-keloka omeny.